फागुन १०, काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले रु. १००० अंकित मूल्यका ४० लाख कित्ता ऋणपत्र बाँडफाँड गरेको छ । धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडले उक्त ऋणपत्र फागुन ९ गते आइतबार बाँडफाँड गरेको हो ।
बैंकले साढे ८ प्रतिशत व्याजदर भएकोे ऋणपत्र गत माघ १६ गतेदेखि फागुन २ निष्कासन गरेको थियो । ऋणपत्र २०८४ सालमा परिपक्व हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकले कुल रु. ४ अर्ब बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो ।
रु. २ अर्ब ४० करोड बराबरको ऋणपत्र ब्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरेको थियो भने ८० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषको लागि व्यवस्था गरेको थियो । बाँकी १६ लाख कित्ता सर्वसाधारण र २४ लाख कित्ता व्यक्तिगत तबरबाट विक्री गरेको थियो ।